Akukho lutho olufana nokwenza ingqungquthela yesifunda, kazwelonke noma yamazwe omhlaba ukuze ikususe ehhovisi futhi ucije amakhono akho. Vele, izabelomali zokuhamba ziqinile futhi isabelomali sokuhambela kungenzeka singabi khona. Ngo- DK New Media, sisebenzisa izingqungquthela ebangeni lokushayela… ukusuka eDetroit kuya eChicago kuya eLouisville, sihlala njalo sibheke ithuba elilandelayo lokuhlangana nabafundi bethu.
Ithuluzi elilodwa ebelilusizo kakhulu Lanyrd. I-Lanyrd iyamangalisa ukukunikeza uhlu oluphelele lwemicimbi abantu kwinethiwekhi yakho abahlela ukuyihambela! Okuhle kunakho konke, kumahhala! Uma ungumgqugquzeli womcimbi, ungangeza nengqungquthela yakho kuthuluzi! Ezinyangeni ezimbalwa ezizayo sihlela ukuhambela imicimbi ephakathi kweParis, France neLos Angeles, California. Uma usemcimbini, qiniseka ukuthi ume bese uxoxa!